(trg)="2"> Ị̀ PỤRỤ ichetụ n’echiche aha oge ndị mmadụ na - etinye kwa afọ nanị n’ichere ihe ?
(trg)="3"> Ha na - akwụ n’ahịrị na - echere n’ụlọ ahịa ma ọ bụ n’ọdụ mmanụ ụgbọala .
(trg)="4"> Ha na - echere ka e nye ha ihe oriri n’ụlọ nri .
(trg)="5"> Ha na - echere iji hụ dọkịta .
(trg)="6"> Ha na - echere bọs na ụgbọ okporo ígwè .
(trg)="7"> Ee , mmadụ na - etinye aha oge dị ịtụnanya nke ndụ ya n’iche ka ihe mee .
(trg)="8"> Dị ka otu atụmatụ e mere si dị , ndị Germany nanị na - etufu ijeri awa 4.7 kwa afọ nanị n’ichere n’ebe e nwere ọnọdụ agaghị ihu agaghị azụ nke ụgbọala !
(trg)="9"> Otu onye gụkọtara na nke a hà ka ngụkọta nke afọ ndụ mmadụ 7,000 ga - adịru .
(trg)="10"> Ichere ihe pụrụ nnọọ ịdị na - eweta nkụda mmụọ .
(trg)="11"> N’oge ndị a , ọ dịghị eyitụdị ka è nwere oge zuru ezu ime ihe nile , iche echiche banyere ihe ndị ahụ anyị kwesịrị ịdị na - eme pụkwara ime ka ichere ihe ghọọ nnọọ ule .
(trg)="12"> Onye edemede bụ́ Alexander Rose kwuru n’otu oge , sị : “ Ọkara nke oké ihe mgbu mmadụ na - enwe ná ndụ bụ ichere ihe . ”
(trg)="13"> Onye America ọnụ na - eru n’okwu bụ́ Benjamin Franklin ghọtara na ichere ihe pụkwara ịdị na - efu ihe .
(trg)="14"> Ihe karịrị afọ 250 gara aga , o kwuru , sị : “ Oge bụ ego . ”
(trg)="15"> Ọ bụ ya mere ụlọ ọrụ achụmnta ego dị iche iche ji achọ ụzọ ndị ha ga - esi zere igbu oge na - enweghị isi n’oge ọrụ .
(trg)="16"> Ngwá ahịa ka ukwuu e mepụtara n’oge ka nta pụrụ iweta uru ka ukwuu .
(trg)="17"> Ụlọ ọrụ achụmnta ego ndị na - ejere ọha na eze ozi na - agbalị imere ha ihe ngwa ngwa — nri onye ọ dị ngwa , ụlọ akụ̀ ndị ọ dị ngwa , na ihe ndị yiri ha — n’ihi na ha maara na ime ka onye ahịa nwee obi ụtọ na - agụnye ibelata oge o ji na - echere .
(trg)="18"> Imefusị Oge Ndụ Anyị
(trg)="19"> Onye America na - ede uri nke narị afọ nke 19 bụ́ Ralph Waldo Emerson mere mkpesa n’otu oge , sị : “ Lee akụkụ dị ukwuu nke ndụ mmadụ a na - etufu n’ichere ihe ! ”
(trg)="20"> N’oge na - adịbeghị nnọọ anya , onye na - ede akwụkwọ bụ́ Lance Morrow mere mkpesa banyere ike ọgwụgwụ na ntakasị ahụ nke ichere ihe .
(trg)="21"> Ma mgbe ahụ , o kwuru banyere “ nhụsianya na - apụtachaghị ìhè nke ichere ihe . ”
(trg)="22"> Gịnị ka nke ahụ bụ ?
(trg)="23"> “ Ịmara na a na - ezuru akụ̀ kasị oké ọnụ ahịa nke mmadụ , bụ́ oge , nke bụkwa akụkụ nke ndụ mmadụ , na ọ na - efu mie ala . ”
(trg)="24"> Ọ dị mwute , ma ọ bụ eziokwu .
(trg)="25"> Oge e tufuru n’ichere ihe efunyụọla anya .
(trg)="26"> N’ezie , ọ bụrụ na ndụ adịghị nnọọ nkenke , ichere ihe agachaghị abụ ihe na - akpata nchegbu .
(trg)="27"> Ma ndụ dị nkenke .
(trg)="28"> Ọtụtụ puku afọ gara aga , ọbụ abụ nke Bible kwuru , sị : “ Ụbọchị afọ nile anyị dị [ iri afọ asaa ] ; ma ọ bụrụ na ha esite n’ịdị ike anyị ruo [ iri afọ asatọ ] , otú ọ dị , nganga ha bụ nanị ịdọgbu onwe ha n’ọrụ na ajọ ihe ; n’ihi na ọ gbapụwo ọsọ ọsọ , anyị wee felaa dị ka nnụnụ . ”
(trg)="29"> Ebe ọ sọrọ anyị biri , onye ọ sọkwara anyị bụrụ , ndụ anyị — ụbọchị , awa , minit ndị dị n’ihu anyị mgbe a mụrụ anyị — bụ́ nke a kpaara ókè .
(trg)="30"> Ma , anyị apụghị izere ọnọdụ ndị a na - amanye anyị igbu ụfọdụ n’ime oge ndị ahụ dị oké ọnụ ahịa n’ichere ihe ma ọ bụ ndị mmadụ na ha .
(trg)="31"> Ịmụta Otú E Si Echere Ihe
(trg)="32"> Ihe ka ọtụtụ n’ime anyị anọtụwo n’ụgbọala nke onye na - akwọ ya nọgidere na - anwa ịgafe ụgbọala nọ ya n’ihu .
(trg)="33"> Mgbe mgbe , a dịghị enwe mkpa chọrọ ka e gboo ya ngwa ngwa — ọkwọ ụgbọala ahụ adịghị enwe onye ya na ya yiri oge nke ọ chọrọ ịhụ ngwa ngwa .
(trg)="34"> Ma , ọ pụghị ịnagide ịbụ onye ọkwọ ụgbọala ọzọ na - achịkwa otú ọ ga - esi na - agba ọsọ .
(trg)="35"> Enweghị ndidi ya na - egosipụta na ọ mụtabeghị otú e si echere ihe .
(trg)="36"> À na - amụta ya amụta ?
(trg)="37"> Ee , ịmara otú e si echere ihe bụ ihe a na - aghaghị ịmụta amụta .
(trg)="38"> Ọ dịghị onye bu ya pụta ụwa .
(trg)="39"> Ụmụ ọhụrụ na - achọ ka e lebara ha anya ozugbo mgbe agụụ na - agụ ha ma ọ bụ mgbe ha na - enwe ntakasị ahụ .
(trg)="40"> Ọ bụ nanị mgbe ha na - etolite ka ha na - aghọta na mgbe ụfọdụ ha aghaghị ichere iji nweta ihe ha chọrọ .
(trg)="41"> N’ezie , ebe ọ bụ na ichere ihe bụ akụkụ a na - apụghị izere ezere nke ndụ , ịmara otú e si eji ndidi echere ihe mgbe ọ dị mkpa bụ ihe e ji ama onye tozuru okè .
(trg)="42"> N’ezie , e nwere ọnọdụ ndị chọrọ ime ihe ngwa ngwa bụ́ mgbe ihe mere mmadụ na - ejighị nwee ndidi na - ekwe nghọta .
(trg)="43"> Di na - akatabeghị ahụ nke na - akwọga nwunye ya n’ụlọ ọgwụ n’ihi na ime na - eme ya , ga - ezi ezi ma ọ bụrụ na o nweghị ndidi banyere igbu oge .
(trg)="44"> Ndị mmụọ ozi ahụ na - agba Lọt ume ịhapụ Sọdọm adịghị njikere ichere mgbe Lọt na - egbu oge .
(trg)="45"> Mbibi na - achọ ịbịa , ndụ Lọt na ezinụlọ ya dịkwa n’ihe ize ndụ .
(trg)="46"> Otú ọ dị , n’ihe ka ọtụtụ n’ọnọdụ , ndụ adịghị adị n’ihe ize ndụ mgbe a na - amanye ndị mmadụ ichere .
(trg)="47"> N’ọnọdụ ndị ahụ , ihe pụrụ ịka nnọọ mma ma ọ bụrụ na mmadụ nile amụta inwe ndidi — ọbụna ma a sị na ọ bụ enweghị nkà ma ọ bụ enweghị mmasị nke onye ọzọ kpatara nchere ahụ .
(trg)="48"> Ọzọkwa , inwe ndidi ga - aka mfe ma ọ bụrụ na onye ọ bụla amụta otú e si eji oge e ji na - echere ihe eme ihe n’ụzọ bara uru .
(trg)="49"> Igbe dị na peeji nke 5 nwere aro ụfọdụ banyere ime ka ichere ihe bụrụ ọ bụghị nanị ihe a ga - anagideli kama ọbụna ihe ga - aba uru .
(trg)="50"> A pụghị ileghara ya anya na àgwà nke enweghị ndidi pụrụ igosipụta omume nganga , inwe mmetụta na mmadụ dịbigara mkpa ókè ịbụ onye a ga - eme ka o chere .
(trg)="51"> O kwesịrị ekwesị ka onye ọ bụla nwere àgwà dị otú ahụ tụlee okwu ndị na - esonụ bụ́ ndị sitere na Bible : “ Ọ dị mma , bụ́ onye mmụọ ya nwere ogologo ntachi obi , karịa onye mmụọ ya dị elu . ”
(trg)="52"> Mpako , ma ọ bụ nganga , bụ ntụpọ jọgburu onwe ha n’àgwà mmadụ , ilu Bible na - ekwukwa , sị : “ Ihe arụ n’anya Jehova ka onye ọ bụla bụ nke obi ya dị elu . ”
(trg)="53"> Ya mere , ịmụta inwe ndidi — ịmụta otú e si echere ihe — pụrụ ịchọ ka anyị nyochaa onwe anyị nakwa mmekọrịta anyị na ndị nọ anyị gburugburu , nke ọma .
(trg)="54"> A Ga - akwụghachi Inwe Ndidi Ụgwọ
(trg)="55"> Anyị na - ahụkarị na ọ na - aka adịrị anyị mfe ichere ihe ma ọ bụrụ na anyị ekwenyesie ike na ihe anyị na - echere kwesịrị oge ndị anyị na - egbu nakwa na ọ ga - emesị bịa .
(trg)="56"> Banyere nke a , ọ dị mma ịtụgharị uche n’eziokwu ahụ bụ́ na ndị nile ji ezi obi efe Chineke na - echere mmezu nke nkwa ya ndị dị ebube bụ́ ndị a na - achọta na Bible .
(trg)="57"> Dị ka ihe atụ , a na - agwa anyị n’abụ ọma a bụrụ n’ike mmụọ nsọ Chineke , sị : “ Ndị ezi omume ga - enweta ala , birikwa n’elu ya ruo mgbe ebighị ebi . ”
(trg)="58"> Jọn onyeozi kwughachiri nkwa a mgbe o kwuru , sị : “ Onye na - eme ihe Chineke na - achọ na - anọgide ruo mgbe ebighị ebi . ”
(trg)="59"> N’ụzọ doro anya , ọ bụrụ na anyị pụrụ ịdị ndụ ebighị ebi , ichere ihe agaghị abụ oké nsogbu .
(trg)="60"> Ma anyị anaghị adị ndụ ebighị ebi kpọmkwem ugbu a .
(trg)="61"> Ọ̀ bụdị ihe ezi uche dị na ya ikwu banyere ndụ ebighị ebi ?
(trg)="62"> Tupu anyị azaa ajụjụ ahụ , cheta na Chineke kere nne na nna anyị mbụ inwe atụmanya nke ịdị ndụ ebighị ebi .
(trg)="63"> Ọ bụ nanị n’ihi na ha mehiere mere atụmanya ahụ ji funahụ ma ha ma ụmụ ha — gụnyere anyị onwe anyị .
(trg)="64"> Otú ọ dị , ozugbo ha mehiesịrị , Chineke kwupụtara nzube ya iwepụ ihe nnupụisi ha kpatara .
(trg)="65"> O kwere nkwa maka ọbịbịa nke “ mkpụrụ , ” bụ́ onye mesịrị bụrụ Jisọs Kraịst . — Jenesis 3 : 15 ; Ndị Rom 5 : 18 .
(trg)="66"> Ọ bụ anyị n’otu n’otu ka ọ dịịrị ikpebi ma ànyị ga - erite uru site ná mmezu nke nkwa ya .
(trg)="67"> Ọ ga - achọ inwe ndidi iji mee nke ahụ .
(trg)="68"> Iji nyere anyị aka ịmụta inwe ụdị ndidi a , Bible na - agba anyị ume ịtụgharị uche n’ihe atụ nke onye ọrụ ugbo .
(trg)="69"> Ọ na - akụ mkpụrụ ya , o nweghịkwa ihe ọzọ ọ ga - eme karịa iji ndidi chere — na - eme ihe o nwere ike ime iji chekwaa ihe ọ kụrụ — ruo mgbe oge iwe ihe ubi ga - eru .
(trg)="70"> Mgbe ahụ , a na - akwụghachi ndidi o nwere ụgwọ , ọ na - ahụkwa ihe si n’ọrụ ya pụta .
(trg)="71"> Pọl onyeozi na - ehota ihe atụ ọzọ banyere ndidi .
(trg)="72"> Ọ na - echetara anyị banyere ndị ikom na ndị inyom kwesịrị ntụkwasị obi n’oge ochie .
(trg)="73"> Ha nọ na - elepụ anya ịhụ mmezu nke nzube Chineke , ma ha aghaghị ichere maka oge Chineke kara aka .
(trg)="74"> Pọl na - agba anyị ume iṅomi ndị a , bụ́ “ ndị ji okwukwe na ogologo ntachi obi na - eketa nkwa ahụ . ” — Ndị Hibru 6 : 11 , 12 .
(trg)="75"> Ee , ichere ihe bụ ihe a na - apụghị izere ezere ná ndụ .
(trg)="76"> Ma o kwesịghị ịnọgide na - abụ ihe na - ewetara anyị obi erughị ala .
(trg)="77"> Ọ ga - abụrụ ndị na - echere mmezu nke nkwa Chineke ihe na - enye ọṅụ .
(trg)="78"> Ha pụrụ iji oge ndị ahụ ha na - echere mee ihe site n’ịzụlite mmekọrịta chiri anya n’etiti ha na Chineke na n’ịrụ ọrụ ndị na - egosipụta na ha nwere okwukwe .
(trg)="79"> Sitekwa n’ekpere , ọmụmụ ihe , na ntụgharị uche , ha pụrụ ịzụlite obi ike na - adịghị ada ada na ihe ọ bụla Chineke kweworo ná nkwa ga - emezu n’oge ọ kara aka .
(trg)="80"> [ Igbe / Foto ndị dị na peeji nke 5 ]
(trg)="81"> BELATA OKÉ IHE MGBU NKE ICHERE IHE !
(trg)="82"> Buru ụzọ mee atụmatụ !
(trg)="83"> Ọ bụrụ na ị maara na ị ghaghị ichere , dị njikere ịgụ ihe , ide ihe , ịkpa ihe , ịdụ ihe , ma ọ bụ ime ụfọdụ ihe ndị ọzọ bara uru .
(trg)="84"> Jiri oge ahụ tụgharịa uche , bụ́ ihe na - esiwanye nnọọ ike omume n’ụwa anyị a nke ndụ gbalụ gbalụ .
(trg)="85"> Debe akwụkwọ ọgụgụ ụfọdụ nso n’akụkụ telifon ma ọ bụrụ na a sịri gị jide fon ma cheretụ ; ị pụrụ iji minit ise ma ọ bụ iri gụọ ọtụtụ peeji .
(trg)="86"> Mgbe unu dị ọtụtụ na - echere , jiri ohere ahụ mee ihe , ma ọ bụrụ na o kwesịrị ekwesị , n’iso ndị ọzọ kwurịta okwu na isoro ha kerịta echiche ndị na - ewuli elu .
(trg)="87"> Debe akwụkwọ ndekọ ihe ma ọ bụ akwụkwo ọgụgụ n’ime ụgbọala gị maka oge ị ga - echere ihe ndị ị na - atụghị anya iche .
(trg)="88"> Mechie anya gị , tụsara ahụ , ma ọ bụ kpee ekpere .
(trg)="89"> N’ỤZỌ BỤ́ ISI , ICHERE IHE N’ỤZỌ GARA NKE ỌMA NA - ADABERE N’OMUME NA N’ICHEPỤ ECHICHE N’IHU .
(trg)="1"> Na - egosipụta Ụzọ Iche Echiche Nke Kraịst
(trg)="2"> “ Ka Chineke onye na - enye ntachi obi na nkasi obi kwe ka unu nwee n’etiti onwe unu otu ụzọ iche echiche ahụ nke Kraịst Jisọs nwere . ” — NDỊ ROM 15 : 5 , NW .
(trg)="3"> Olee otú àgwà mmadụ pụrụ isi metụta ndụ ya ?
(trg)="4"> ÀGWÀ na - enwe mmetụta dị ukwuu ná ndụ .
(trg)="5"> Àgwà ọ gbasaghị m ma ọ bụ nke ịdị uchu , àgwà ziri ezi ma ọ bụ nke na - ezighị ezi , àgwà nnupụisi ma ọ bụ nke ikwenye ekwenye , àgwà ime mkpesa ma ọ bụ nke inwe ekele pụrụ inwe mmetụta siri ike n’otú mmadụ si edozi nsogbu nakwa n’otú ndị ọzọ si emeso ya ihe .
(trg)="6"> Ọ bụrụ na mmadụ enwee àgwà ọma , ọ pụrụ inwe obi ụtọ ọbụna n’ọnọdụ ndị tara nnọọ akpụ .
(trg)="7"> Nye onye nwere àgwà ọjọọ , ọ dịghị ihe na - eyi ka ò ziri ezi , ọbụna mgbe — ọ bụrụ na e jiri obi ziri ezi tụlee ya — ndụ na - agazi agazi .
(trg)="8"> Olee otú mmadụ si amụta àgwà ?
(trg)="9"> Àgwà — ma nke ọma ma nke ọjọọ — bụ ihe a pụrụ ịmụta amụta .
(trg)="10"> N’ezie , a ghaghị ịmụta ha amụta .
(trg)="11"> Mgbe ọ na - ekwu banyere nwa a mụrụ ọhụrụ , akwụkwọ bụ́ Collier’s Encyclopedia na - ekwu , sị : “ Ọ ghaghị ịmụta àgwà ọ bụla ọ ga - emesị nwee amụta , dị nnọọ ka ọ na - aghaghị ịmụta asụsụ ma ọ bụ nkà ọ bụla ọzọ , ruo n’ókè ụfọdụ . ”
(trg)="12"> Olee otú anyị si amụta àgwà ?
(trg)="13"> Ọ bụ ezie na ọtụtụ ihe na - atụnye ụtụ , gburugburu ebe obibi na mkpakọrịta na - enwe mmetụta dị ukwuu ná ndụ mmadụ .
(trg)="14"> Akwụkwọ nkà ihe ọmụma ahụ a kpọtụburu aha , na - ekwu , sị : “ Anyị na - amụta ma ọ bụ na - eji nwayọọ nwayọọ amịkọrọ àgwà nke ndị anyị na ha na - akpachi anya . ”